Nepal - आईबी राईको एक्टिभिज्म
आईबी राईको ‘एक्टिभिज्म’को सबैलाई लोभ लाग्छ । हामी सामान्य मानिसलाई आफ्नै वरिपरि घुम्दैमा समय कहिल्यै निक्लँदैन । पुग्दैन ।
- मनु मन्जिल, काठमाडौं
‘चाखलाग्दो हुनु कसरी ?’ भन्ने निबन्ध सन् १९४९ तिरै लेखेर साहित्यमा प्रवेश गरेका थिए, इन्द्रबहादुर राई ।
साहित्यका क्षेत्रमा त्यो एउटा विराट प्रश्न थियो किनभने अधिकांश लेखक आफैँलाई त्यसरी प्रश्न गर्दैनन् । धेरैका लागि आफूले लेखेका कुरा ‘साहित्य भए भइगो, नभए के त !’ भनेजस्तो मात्रै हुन्छ । तर, आईबी राई एउटा ठूलो प्रश्नवाचक चिह्नले आफैँलाई हिर्काएर मात्र साहित्यमा प्रवेश गरे । लेखकका रूपमा जीवनभर ‘चाखलाग्दो हुन’ उनले थोरै दु:ख बेहोर्नुपरेन । परम्परागत च्याप्टो साहित्यमा थप काम गर्नु बेकार थियो । भक्ति, लालित्य र बूढो आदर्शको गफ दिने थप अर्को एउटा मान्छे हुन उनलाई मन थिएन । नवीनता नभए किन लेख्नु भन्ने भाव सधैँ मुटु छोएर बसिरहन्थ्यो । त्यसैले एउटा नयाँ बाटोको खोजी उनका निम्ति अपरिहार्य थियो ।
आईबी राईलाई थाहा थियो, मानिसले दु:खको लामो बाटामा गएर मात्र चम्कन पाउने हो । जस्तो : युद्धमा वीरता देखाएर, कठोर साधनामा गएर, क्रान्तिमा सहिद भएर, दुर्गम्य हिमाल चढेर, दशकौँको अभ्यास र मिहिनेतपछि एक–दुई राम्रा गीत गाएर, एक–दुई कविता–कथा लेखेर, एक–दुई नाटक–उपन्यास लेखेर, त्यसरी मुस्किलले मानिस अलि–अलि चम्किने हो । आईबीले त्यही दु:खको बाटो रोजे र रहरै रहरमा ठूलठूला बोझहरू बोकिहिँडे ।
आफ्नै रहरको बोझ जीवनभर बोकिहिँड्ने मानिसलाई ‘भरिया’ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो मलाई थाहा छैन । यदि मिल्छ भने नि:सन्देह ऊ एक महान् भरिया हो । जस्तो : साहित्यमा गहिराइ भएन । अब गहिराइ ल्याउने बोझ उनले लिए ।
च्याप्टो साहित्य चाखलाग्दो भएन । चाखलाग्दो लेख्नु कसरी ? त्यसको बोझ उनले लिए ।
साहित्यमा समग्रता पटक्कै आएन । अनुभूतिले समाएजस्तै एकैपटक साहित्यमा समग्र कुरा लेख्ने बोझ त्यो उनले लिए ।
साहित्यमा भोग आयो, योग आएन । अर्को बोझ उनले समाए ।
प्रचलित भाषाले केही भनेन । त्यो बोझ पनि उनैले लिए ।
सत्य, आदर्श, यथार्थ लेखियो । असत्य, अ–आदर्श, अयथार्थ लेखिएन । त्यसको बोझ पनि उनैले बोके । डिकन्स्ट्रक्सन पनि, बौद्धदर्शन पनि, आधुनिक पनि, रामायण पनि लिएर एउटा नयाँ साहित्य लेखिनुपर्ने । त्यो बोझ पनि उनैले लिए ।
अनुभूति सीधा लेखिँदैन । ‘मिथ’, ‘इमेज’ र ‘एम्बिग्विटिज’ले लेख्ने बोझ पनि उनैले उठाए ।
आईबी सरलाई लाग्यो, यी हाम्रा साहित्यका कमीहरूमाथि केही काम गर्न सके ‘चाखलाग्दो’ हुन सकिन्छ । जीवनको नौ दशकसम्म यिनै बोझ, भारी बोक्दै, केही नयाँ सोच्दै, नयाँ लेख्दै आईबी हिँडिरहे । एक युग नेपाली साहित्यको सानो ब्रह्माण्डमा प्रशंसा र आलोचनाको निरन्तर भुमरीका माझ आईबी यात्रारत रहे । साहित्यमा चाखलाग्दो हुनु कसरी ? उनको पछिल्लो जीवन स्वयं नै त्यसको जवाफ बन्यो ।
आईबी राईले उठाएको बोझ अलिक अर्को खालको पनि छ । लम्बाइ र चौडाइमा मात्र फैलिएको पुरानो साहित्यमा पात्रहरू एकदम बेकामका थिए । ती कस्ता भने समाज अर्को छ, समस्या अर्कै छ । तर, कथामा, कवितामा भने नायक बिलकुल फरक छ । एकदम ‘आइसोलेटेड’ छ । अनि, पढ्दा सधैँ अर्काको कथा पढिरहेजस्तो लाग्ने ।
आधुनिक मान्छे त बुद्धिसहितको छ । विद्रोही छ । परम्परागत मूल्यको विरोध गर्छ । आफ्नो अस्तित्वको, स्वत्वको घोषणा पनि आफैँ गर्छ । कथामा, कवितामा नायक/नायिका त त्यो पात्र हुनुपर्ने ।
आईबी, बैरागी काइँला र वल्लभले आयामेली लेखनमार्फत ‘बौद्धिक मान्छेको जन्म एक महान् जन्म’ भन्ने घोषणा नै गरेर त्यो बौद्धिक मानिसलाई जीवनको जटिलताविरुद्ध लडाएर नायकत्व दिलाए । अनि मात्र साहित्य हाम्रो युगको जस्तो, हाम्रो मानिस र समाजको जस्तो देखियो । त्यसमा आईबीले लगातारजसो काम गरे । ‘जयमाया आफूमात्र लेखापानी आइपुगी’, ‘रातभरि हुरी चल्यो’ भन्ने कथाका पात्रहरू कस्ता छन् भने सबै जटिलताविरुद्ध आफैँ लड्ने खालका छन् । पात्र नै बौद्धिक भएपछि लेखनमा स्वत: बौद्धिकता र गहिराइ अर्थात् तेस्रो आयाम देखिइहाल्यो । आईबीले त्यो गरे । त्यो हेर्दा सामान्य लाग्ने तर साहित्यमा बडो महत्त्वको काम थियो । बैरागी काइँलाको ‘मातेको मान्छेको भाषण : मध्यरातको सडकसित’ होस् वा ‘अस्तित्वको दाबीमा सावातको वैला उत्सव’ होस्, ती त्यही अभिप्रायका महान् रचनाहरू हुन् । बोल्न नपाएका पात्रहरू काइँलाका रचनामा मध्यरातमा रक्सी पिएर भाषण गरिहिँड्छन् । जडताविरुद्ध नाच्छन् । त्यसरी आयामेलीले एउटा बोझिल तर ठूलो महत्त्वको काम गरे, जसको प्रभाव आज पनि साहित्यमा सर्वोपरि छ ।
साहित्यको जहाज त्यसरी अब नयाँ मोडतिर गयो । त्यो नयाँ जहाजको क्याप्टेन आईबी नै थिए । एउटा ठूलो आँधीमय समुद्रमा ती तीन आयामेली नामक जहाजीहरू दशकौँसम्म यात्रा गरिरहे । सबैभन्दा अप्ठ्यारो कहाँनेर थियो भने विचार मात्रै दिएर केही हुन्नथ्यो । आदि शंकराचार्यहरूले, बुद्धहरूले पनि विचार त अनेक दिए । तर, साहित्यमा त्यसको सिर्जनशील प्रयोग महत्त्वको कुरा थियो । भाग्यवश त्यो जटिल बोझ गद्यमा राईले र कवितामा काइँला र वल्लभले बोके । र, कम्तीमा ‘आयाम’को आन्दोलनको समयभरि त्यो साझेदारीले ठूलो काम गर्‍यो । तर, आईबी बोझले थाक्ने मानिस नै थिएनन् । ‘आयाम’को प्रतिष्ठाको ब्याज मात्रैले पनि जीवन चम्केकै थियो । तर, उनले लीला अवधारणा अघि सारे र जीवनको उत्तराद्र्धमा एक्लैले अर्को बोझ वरण गरे । कृष्ण धरावासी र साथीहरूले यो पछिल्लो बोझ थेग्न हात–पाखुराको काम गरे । तर, सारा शरीरको बोझ भने आईबीले नै जीवनपर्यन्त बोकी हिँडे ।
आईबी राईको ‘एक्टिभिज्म’को सबैलाई लोभ लाग्छ । आफूले पनि उनले गरेजस्तो केही गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, गर्न सकिन्न । हामी सामान्य मानिसलाई आफ्नै वरिपरि घुम्दैमा समय कहिल्यै निक्लँदैन । पुग्दैन ।
‘एउटा भरिया : तर अनेक गह्रौँ बोझको अवतार’ छ उनको । उनले गरेका कथाको अनेक प्रयोग र त्यसमा लाग्ने समय हेर्दा लाग्छ, यिनले कहिले पढ्ने होलान् । उनले गरेको पूर्वीय र पश्चिमको ज्ञान, विज्ञान, धर्म, साहित्य, चित्रकला, संगीत र दर्शनको अध्ययनको आकाशजस्तो व्यापकता हेर्दा लाग्छ, यिनले कहिले लेख्ने होलान् । यिनले लेखेका कथा, उपन्यास, निबन्ध, समालोचना, अवधारणा, व्याख्या आदिको ‘भोल्युम’ र तिनको कलात्मक मूल्य र उच्चता हेर्दा लाग्छ, यिनले कहिले नेपाली भाषाका निम्ति काम गर्लान् । तर, फूल पात पतकरको प्रकाशन, दियालो पत्रिकाको प्रकाशन, नेपाली साहित्य परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी, भारतमा नेपाली भाषाको मान्यताका निम्ति गरेको संघर्ष, भानुभक्त पुरस्कारको स्थापना, नर्थ बंगालमा नेपाली भाषा एकेडेमीको स्थापना आदिका लागि गरेका काम हेर्दा लाग्छ, यिनका दर्जनौँ अदृश्य हात छन्, दर्जनौँ खुट्टा, दर्जनौँ मस्तिष्क र दर्जनौँ अवतार छन् ।
आईबी नेपाली भाषाका निम्ति भारतमा विशेषदूतसरह छन् । जुन गाम्भीर्य र मोहले, जुन प्रेम, कोमल भाव र सपनाहरूले सजाएर नेपाली भाषामा सिर्जनाहरू उनले दिए, तिनको अरू कसैसँग तुलना छैन । एकपटक मोरारजी देसाई भारतका प्रधानमन्त्री थिए । एउटा भाषणमा फ्याट्ट उनले नेपाली भाषालाई विदेशीको भाषा भनिदिए । त्यसबेलासम्म राई एक जना मात्र प्रतिष्ठित भारतीय साहित्य अकादमीद्वारा पुरस्कृत र सम्मानित नेपालीभाषी साहित्यकार थिए । उनले तुरुन्तै आफ्नो सम्मान र नगद फिर्ता गरिदिए । त्यसले भारतको साहित्यिक, बौद्धिक र राजनीतिक वृत्तमा नेपाली भाषाको पक्षमा ठूलो चाप सिर्जना गर्‍यो । अनेकन भारतीय विश्वविद्यालयबाट पटक–पटक ‘हिरो अफ द वर्कसप’को सम्मान पाएका उनले सम्मान नै फिर्ता गरिदिँदा सारा वातावरणमा एउटा तापको, हलचलको सिर्जना भयो । तिनै आन्दोलनहरूको पृष्ठभूमिमा पछि गएर नेपाली भाषाले भारतमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको थियो ।
नेपाली साहित्यिक वृत्तमा आईबी दाजुले लेखेको भन्दा बोलेका कुराहरूको बढी चर्चा हुन्छ । राईको अभिव्यक्तिमा, भाषामा एउटा कविको उपस्थिति सर्वदा महसुस हुन्छ । छोटो गफगाफ होस् वा घन्टौँ लामो भाषण, हरेक वाक्यमा सौन्दर्य र सिर्जनशीलता दिन सक्ने वक्ता र भाषणबाजहरूमा उनी नि:सन्देह अद्वितीय छन् । ठूला मानिसहरू भेट्दा मलाई उति आश्चर्य कहिल्यै लागेन । तर, आईबी दाइसँगको कुनै भेट त्यस्तो छैन, जुन बेला उनको कुनै न कुनै अभिव्यक्तिले चकित भएर म नफर्केको हुँ । उहिले उत्तम कुँवरले रूपरेखाका लागि अन्तर्वार्ताका क्रममा उनलाई सोधिदिए, ‘साहित्यमा के
योगदान दिनुभो ?’
आईबीले भनिदिए, ‘यस्तो महानताको प्रश्न जस–तसलाई गर्नुहुँदैन ।’
आफ्नो जन्मकथा सुनाउँदा उनी भन्छन्, “जन्मनुपूर्व म सूर्यको स्वर्ण किरणमा उडिरहेको थिएँ । म ताराहरूतिर पनि जान सक्थेँ । तर, पछि दार्जीलिङको वालासन खोलाको बगरमा म रूखदेखि झरेको ।”
मैले अन्तिम पटक आईबी दाजुलाई नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलका बेला भेटेको थिएँ । ललितपुरको होटल हिमालयमा अजित बरालजीले आईबी दाइ, वात्स्यायन दाइ, सरुभक्त, कृष्णभूषण बल, तीर्थ श्रेष्ठ दाइहरू र मलाई सँगै बस्ने वातावरण मिलाइदिनुभएको थियो । आईबी फेस्टिभलका ‘कि–नोट स्पिकर’ थिए । भोलिपल्ट दिउँसो मैले पनि युवाहरूको सिर्जनशीलतामाथि बोल्नुपर्ने थियो । बिहानको समय । आईबी दाइ होटलको रिसेप्सन डेस्कको अगाडि एउटा सोफामा कफी पिएर केही सोच्दै थिए । मलाई चाहिँ आफूले बोल्नुपर्ने विषयको विशालताले हुस्सुले झैँ चारैतिरबाट छोपिराखेको थियो । बोल्न त बोल्ने तर कहाँबाट सुरु गर्ने र कसरी ?
आईबी दाइले झैँ चाखलाग्दो हुनु कसरी ? मैले दाइलाई फ्याट्ट सोधिदिएँ, ‘दाजै, यो युवा हुनु भनेको के रहेछ ?’
बूढाले त उत्तर अघि नै ठिक्क पारेर राखेझँै गरी अगाडिको एउटा अग्लो स्तम्भ देखाउँदै भनिदिए, ‘मनु † तपार्इंको उमेरमा यहाँबाट त्यो खम्बासम्म जान्छु भनेपछि मेरो मन पनि सीधै जान्थ्यो । शरीर पनि सीधै जान्थ्यो । तर, अहिलेको मेरो उमेरमा त्यहाँसम्म जान्छु भन्यो, मनचाहिँ सीधै तीर गएजसरी जान्छ । शरीरचाहिँ घरि यता, घरि उता हल्लिँदै हल्लिँदै मात्र त्यहाँसम्म पुग्छ ।’ मलाई उनको भनाइ खुब रमाइलो र काव्यिक लाग्यो । मैले उनकै भनाइबाट सुरु गरेर उनकै सामुन्ने भोलिपल्टको महोत्सवमा आफ्नो भनाइ राखेको थिएँ ।
आईबी दाजु जन्म र जीवनमा पनि सूर्यको स्वर्ण किरणझैँ ओजस्वी भए । अहिले जीवन छाडेर फेरि सूर्यको स्वर्ण किरणमा उड्दै–उड्दै ताराहरूतिर गए । हामी अझै यही धरतीमै छौँ । कठपुतलीको जस्तो जीवन पाएर पनि आफ्नो युगभरि उनी महानायकको अवतारमा बाँचे । ‘लिड सिंगर’जस्तो, ‘लिड प्लेयर’जस्तो भूमिकामा बाँचे । उनको जीवन सम्झँदै मात्र पनि ‘मानिसको जन्म एक महान् जन्म’ हो नै जस्तो लागिरहन्छ र हराइसकेको भित्रको इच्छाशक्ति पनि फेरि बौरिँदै, बलियो–बलियो हुँदै आउँछ ।